သို့ဆိုရင်တော့အရွယ်ရောက်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်သင်တို့သည်လည်းအထဲသို့အမျိုးသားများအတွက်၊ထို့နောက်သင်လုံးဝအံ့လောက်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အစုအရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုဒ်အသစ်နှင့်အတူကြွလာ၏အချို့ရှားပါးဂိမ်းများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာမှလာမယ့်ကျေးဇူးပြုပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းလိင်ရွယ်ရောက်လိင်၊ကျနော်တို့တောင်မှအချို့နောက်ဆက်တွဲမြားစေမည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နှင့်အတူများစွာသောအခြားကစားသမားဖြစ်ကြောင်းသင်လိန်။, ကျွန်တော်ပင်ရှိသည်လိုးဒေါသအမျက်ဂိမ်းအပေါ်ဒီဆိုက်ခဲ့ဖူးဘူးစားအားဖြင့်အနောက်တိုင်းအများပြည်သူမီသောကြောင့်ငါတို့သည်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့မူရင်းဂျပန်တီထွင်သူနှင့်ဘာသာပြန်သူတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ နှင့်အရာသင်ရှာဒီမှာလာမယ့်အတွက် HTML၅၊သည်သောဆိုလိုသောသူအပေါင်းတို့သည်အရွယ်ရောက်ဇာတ်ကောင်တွေခံစားရပါလိမ့်မယ်၊ဒါကြောင့်အစစ်အမှန်နှင့်ရွှေ့မည်။
အားလုံးဂိမ်းများကၽြန္ေတာ္တိုလာမယ့်အပေါ်ဆိုက်ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ အားကစားအရာအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သင့်၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာသင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ။ အများအပြားရှိပါတယ်အင်္ဂါအပေါ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်စေထိတွေ့နှင့်အတူအခြားကစားသမားသည်၊အရွယ်ရောက်ဝန်းတော့တက်ကြွစွာနဲ့ပဲချစ်အောင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ တစ်ခုလုံးကိုအတှေ့အကွုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းခံစားကြရနိုင်တယ်အခမဲ့။ မရှိကန့်သတ်ခြင်းနှင့်မျှမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်နေထိုင်၏။ မဒေါင်းလုတ်ရန်ရှိတယ်ဘာမှကျနော်တို့ဘယ်တော့မှအဘို့အမေးပါ။, ကျနော်တို့ကသင်မေးကိုအတည်ပြုပါတယ်ဆိုတာအသက္ ၁၈ ထိုအခါဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများလိမ့်မည်။
တဦးတည်းအမှုအရာအလုံးကစားသမားအသစ်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်သူတို့ပင်စဉ်းစားဖူးကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောအရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ။ ကောင်းစွာ၊ဤဂိမ်းအမှန်တကယ်ရှားပါးသောအယူတွေအများကြီးအချိန်နှင့်သုတေသနသူတို့ကိုရှာတွေ့မှအားလုံး။ ဒါပေမယ့်တောင်မှသူတို့ရှားပါးသောဖြစ်ကြ၏၊အကြှနျုပျတို့သညျဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မအောင်ဒီဆိုက်အခြားဂိမ်းအပစ်အဘယ်မှာအရာအားလုံးကိုရရှိသြားအဘယ်သူမျှမနေပါစေအရည်အသွေးအအကြောင်းအရာ။ ကျွန်မတို့ဟာအမှန်တကယ်ကစားသမျှသောဤဂိမ်းစမ်းသပ်ဖို့သူတို့ကိုမီသွား၏အပေါ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများ။
ငါတို့သည်လည်းသေချာလုပ်ပူဇော်အမျိုးမျိုးတွင်ဤစုဆောင်းခြင်း။ လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းသူများဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကစားသမားတွေစိတ်ကြိုက်နှင့်မင်းရွယ်ရောက်ဇာတ်ကောင်။ အဆိုပါစိတ်ကြိုက်ပးခ်င္တယ္ဆိုရှုပ်ထွေးသောနှင့်သူတို့သည်သင်နှင့်အတူတက်လာအမျိုးမျိုးအရွယ်ရောက်ရေကူးဝတ်စုံ။ နှင့်အလိင်ဂိမ်းဒီတော့လွတ်မြောက်ပေးခြင်း၊သင်အများကြီးအဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများသေားနှင့်ရာထူး၊အပေါင်းများစွာသောလိင်ကစားစရာနှင့် fetishes သင်ခံစားနိုင်။
ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်ဂိမ်းငါတို့၏ဆိုက်ကို၏အနောက်ဆက်တွဲရွယ်ရောက်ပြီပဲ။ မၾရှင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများ၊ပူဇော်ရနိုင်အောင်နှင့်အတူမရှိပါ။ ဒီဂိမ်းအတွက်သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူတက်လာ၏fursona ဖြင့်စိတ်ကြိုက်မီနူးတဲ့ပဲဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်တဂိမ်းများအတွက်ကျနော်တို့အထက်လောက်စကားပြော။ ပြီးနောက်သင်အလုပ်အကြောင်း၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စူးစမ်းရှာဖွေအင်တာနက်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နှင့်အတူစစ်မှန်သောကစားသမား။ အပြန်အလှန်ပြုနှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်ချက်တင်နှင့်ယုတ်ဂိမ်းကစား။ အတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်အရွယ်ရောက်ဂိမ်းမဆက်စပ်ဖြစ်သို့စကား။, သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ကစားရန်ဒါကြောင့်သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်း!
နောက်ဆုံးသောအချိန်သင်တွေ့ကောင်းတစ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအများအတွက်သင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်စိတ်ကူးယဉ်? အချို့ကိုရှိပါတယ်၊မုခ်ဦးများအတွက်ဒီလိန်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာကြည့်ရှုခဲ့ကြကဲ့သို့ဒီဇိုင်းအတွက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းနှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမအသိုင်းအင်္ဂါနှင့်မျှမမိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ ကောင်းစွာ၊ကျနော်တို့ဒီမှာမှအမှုအရာပြောင်းချင်ကြီးထွားဖို့ဒီဆိုက်ကနေတစ်ရိုးရှင်းပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းသို့အချက်အချာကျသောအားလုံးအရွယ်ရောက်နိူး။ အပြင်အဆိုပါဂိမ်းအပေါင်းတို့နှင့်မှတ်ချက်များအပိုင်း၊ကျွန်တော်သွားဖွင့်စကားပြောခန်းတြင္လိမ့်မည်နောက်ထပ်ပိုပြီးတိုးမြှင့်အကြားအပြန်အလှန်အဖွဲ့ဝင်များ၏။, သင်အစဉ်အမြဲပျော်မွေ့နိုင်တစ်ခုလုံးကိုအတှေ့အကွုံနှင့်အတူအခမဲ့အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါသင်အလာအပေါ်အရွယ်ရောက်လိင်လိင်ဂိမ်းများ။ ခံစား၏သေားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြအရွယ်ရောက်ငါ့သျှင်ဤသည်ဆိုက်ကိုအကွောငျး။